Kuki - Akwukwo Igbo, Cambridge
Kuki bụ obere faịlụ ederede nke na-etinye na kọmputa gị site na ebe nrụọrụ weebụ ị gara. A na-eji ha eme ihe iji rụọ ọrụ weebụsaịtị, maọbụ rụọ ọrụ nke ọma, yana ịnye ozi nye ndị nwe saịtị ahụ.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki ndị a:
A chọrọ kuki a iji nweta ebe nrụọrụ weebụ a na ịtọ oge. Kuki a yiri ka ogologo ederede na nọmba.
Google Analytics Na-anakọta ozi banyere otu ndị ọbịa si eji saịtị anyị. Anyị na-eji ozi iji chịkọta akụkọ na inyere anyị aka melite saịtị ahụ. Kuki ahụ na-anakọta ozi na ụdị aha, tinyere ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na saịtị ahụ, ebe ndị ọbịa bịara na saịtị ahụ na ibe ha gara.
Nchịkọta Nzuzo Google. Ị nwere ike ịhọrọ pụọ na Google Analytics.
Imirikiti ihe nchọgharị weebụ na-ekwe ka ụfọdụ njikwa nke ọtụtụ kuki site na ntọala ihe nchọgharị. Iji chọtakwuo ihe gbasara kuki, gụnyere otu esi achọpụta ihe kuki ejirila na otu esi jikwaa na ihichapụ ha, gaa na www.allaboutcookies.org.